Wakiilka Ousmane Dembele oo furka ku tuuray Barcelona isagoo soo if-bixiyay arrin sharci darro ah ay kooxdan ku kala kacday laacibkeeda – Gool FM
Wakiilka Ousmane Dembele oo furka ku tuuray Barcelona isagoo soo if-bixiyay arrin sharci darro ah ay kooxdan ku kala kacday laacibkeeda
Ahmed Nur January 19, 2022
(Barcelona) 19 Jan 2022. Wada-hadalladii heshiis kordhinta ee u dhexeeyay kooxda kubadda cagta Barcelona iyo xiddigeeda garabka ka ciyaara ee Ousmane Dembele ayaa ceel dheer kusii dhacay kaddib markii wakiilka laacibkan uu daaha ka rogay inay Barca ugu cago-jugleysay Dembele inuusan ciyaareyn illaa uu heshiis cusub aqbalo.
Moussa Sissoko oo ah wakiilka Dembele ayaa sheegay inay sharci darro tahay inay kooxda Barcelona ugu caga jugleyso xiddiga uu matalo inuusan ciyaareyn illaa uu aqbalo qandaraaska ay iyadu wadato.
“Halkan uma joogno inaan sii quudinno baraha bulshada balse runta waa in la sheegaa. Haa, waxaan dalbanay waxyaabo aan u baahannahay, balse waxaan horay u muujinay in xirfadda Ousmane aysan u talin lacag haddii kale halkan ma aanan sii joogi lahayn” ayuu yiri Sissoko oo la hadlay RMC.
“Sidaas darteed, haddii ay Barcelona dooneyso wada-xaajood, miiska way ina la soo fariisan kareyn si aan u wada-hadalno, iskaba daa wada-xaajoode, waxay ku hanjabayaan inuu laacibkeeda u ciyaareyn kooxdooda markale, taasna waa mamnuuc, annaga waxaan ku doodeynaa kaliya Ousmane Dembele xuquuqdiisa haddii ay lama-huraan noqoto” ayuu hadalkiisa sii raaciyay.
Dhanka kale, wakiilka Dembele ayaa sheegay inuusan ka hadli karin mustaqbalka 24-sano jirka Faransiiska ah maadaama uusanba garaneyn waxa uu sameyn karo, balse la arki doono halka ay xaaladdu ku biyo-shubato.
Erling Haaland oo sii kala doortay Barcelona iyo Real Madrid midka uu u dhaqaaqayo suuqa xagaagan
Arteta oo shaaca ka qaaday go’aanka kooxda Arsenal kaddib soo laabashada Aubameyang